ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့ မထင်မှတ်ထားလောက်အောင် အချစ်ခံရလို့ အရမ်းကိုပျော်နေတဲ့ ယွန်း၀တီလွင်မိုး – Update News
ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့ မထင်မှတ်ထားလောက်အောင် အချစ်ခံရလို့ အရမ်းကိုပျော်နေတဲ့ ယွန်း၀တီလွင်မိုး
သို့ပေမယ့်လည်း သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာ မှတစ်ဆင့်အရေးကြီးတဲ့ သတင်းအချက်အလက် တွေကိုတော့ အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ ဝေမျှပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ပမှာနေထိုင်သူတွေလည်း မိသားစုဝင်တွေကို တွေ့ဖို့ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်လာလို့ မရနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေရောက်နေ ရပါတယ်နော်။
ကျောင်းပြီးလို့ ပြန်လာရတော့မယ့် အချိန်မှာ စစ်ကောင်စီမှအာဏာသိမ်းသွားတာကြောင့် ပြန်လာလို့ မရနိုင်သေးပဲ ဖြစ်နေရပါ တယ်နော်။ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်နေထိုင်ရင်းနဲ့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အရမ်းကို ဂရုစိုက်ပြီးချစ်ခင်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်.
ဒီနေ့လေးမှာလည်း ခေးလေးက ခင်ပွန်းဖြစ်သူက လက်မောင်းပေါ်မှာ နာမည်လေးကို တက်တူးထိုးထားလာပေးလို့အရမ်းကိုပျော်ရွင်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်.ခေးကလည်း OMG, who wouldn’t love to see
the love of your life tattooed your name on his arm 😭 😍 ❤ the cutest ever! ❤#yunwaddyxstories ဆိုပြီးရေးသားလာပါတယ်နော်..
စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးလည်း ခေးတို့ ဇနီးမောင်နှံရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပုံလေးကိုကြည့်ပြီးချစ်ပေးကြပါအုံးနော်…